Creva Coin စျေး - အွန်လိုင်း CREVA ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Creva Coin (CREVA)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Creva Coin (CREVA) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Creva Coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $2 690.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Creva Coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Creva Coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Creva CoinCREVA သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000119Creva CoinCREVA သို့ ယူရိုEUR€0.0001Creva CoinCREVA သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00009Creva CoinCREVA သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000108Creva CoinCREVA သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00106Creva CoinCREVA သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.000744Creva CoinCREVA သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.00263Creva CoinCREVA သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.000441Creva CoinCREVA သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000158Creva CoinCREVA သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000164Creva CoinCREVA သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00265Creva CoinCREVA သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.000919Creva CoinCREVA သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.000635Creva CoinCREVA သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.00889Creva CoinCREVA သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.02Creva CoinCREVA သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000162Creva CoinCREVA သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000178Creva CoinCREVA သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.00369Creva CoinCREVA သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.000824Creva CoinCREVA သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0125Creva CoinCREVA သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.14Creva CoinCREVA သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.0451Creva CoinCREVA သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0087Creva CoinCREVA သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.00329
Creva CoinCREVA သို့ BitcoinBTC0.00000001 Creva CoinCREVA သို့ EthereumETH0.0000003 Creva CoinCREVA သို့ LitecoinLTC0.000002 Creva CoinCREVA သို့ DigitalCashDASH0.000001 Creva CoinCREVA သို့ MoneroXMR0.000001 Creva CoinCREVA သို့ NxtNXT0.00847 Creva CoinCREVA သို့ Ethereum ClassicETC0.00002 Creva CoinCREVA သို့ DogecoinDOGE0.033 Creva CoinCREVA သို့ ZCashZEC0.000001 Creva CoinCREVA သို့ BitsharesBTS0.0045 Creva CoinCREVA သို့ DigiByteDGB0.00433 Creva CoinCREVA သို့ RippleXRP0.000385 Creva CoinCREVA သို့ BitcoinDarkBTCD0.000004 Creva CoinCREVA သို့ PeerCoinPPC0.00041 Creva CoinCREVA သို့ CraigsCoinCRAIG0.0526 Creva CoinCREVA သို့ BitstakeXBS0.00493 Creva CoinCREVA သို့ PayCoinXPY0.00202 Creva CoinCREVA သို့ ProsperCoinPRC0.0145 Creva CoinCREVA သို့ YbCoinYBC0.00000006 Creva CoinCREVA သို့ DarkKushDANK0.037 Creva CoinCREVA သို့ GiveCoinGIVE0.25 Creva CoinCREVA သို့ KoboCoinKOBO0.0259 Creva CoinCREVA သို့ DarkTokenDT0.000109 Creva CoinCREVA သို့ CETUS CoinCETI0.333